WAR HADA:-Diyaarad sidday 66 qof oo rakaab ah oo ku burburtay dalka Iiraan… – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAWAR HADA:-Diyaarad sidday 66 qof oo rakaab ah oo ku burburtay dalka Iiraan…
Sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiinta dalka Iiran Diyaarad sidday rakaab gaaraya 60 qof ayaa ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaalla bartamaha dalka Iiraan.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha dalka Iiraan ayaa sheegaysa in diyaaraddu ay ku soo dhacday magaalada Semirom ee gobolka Isfahan.
Diyaaradda ayaa isaga kala goosheysay magaalooyinka Tehraan iyo Yausj, waxaana sida la sheegay saarnaa 60 qof oo rakaab ah iyo lix qof oo ka tirsan shaqaalaha diyaaradda.
Ilaa haatan lama si rasmi ah looma oga khasaaraha nafeed ee ka dhashay burburka diyaaraddaasi oo ay la hayd shirkadda diyaaradaha ee Aseman ee dalkaasi Iiraan.
657,278 total views, 2,363 views today
657,278 total views, 2,363 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
657,150 total views, 2,361 views today
657,150 total views, 2,361 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
657,181 total views, 2,362 views today
657,181 total views, 2,362 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
657,243 total views, 2,363 views today
657,243 total views, 2,363 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
657,302 total views, 2,361 views today
657,302 total views, 2,361 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]